Ku dhawaad 10 macalin oo Al-Shabaab uga dhimatay Qarax ay farsamaynayeen – Hornafrik Media Network
Ku dhawaad 10 macalin oo Al-Shabaab uga dhimatay Qarax ay farsamaynayeen
By Liibaan Nuur	 On Dec 27, 2019
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Hargeysa Yarey oo hoos taga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in maanta uu ka dhacay Qarax xoog leh oo geystay khasaare kala duwan.
Halka uu Qaraxaasi ka dhacay ayaa waxaa la sheegay inay ku sugnaayeen 11 macalin oo ka tirsan kuwa u farsameeya qaraxyada ay ku weerar tagaan dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Dadka ku nool deegaankaas ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa sided ruux oo ku howlanaa sameynta qaraxyadaas ay ku geeriyoodeen, halka dhaawacyadana lagu sheegay todoba kale oo ay ku jiraan dad rayid ah oo goobta ka agdhawaa, waxaana dhaawacyadii loo qaaday xarumaha caafimaad ee degmada Jilib.
Dad ku sugan deegaanka Hargeysa Yarey ayaa sheegay in qaraxaas uu ka dhacay goob lagu farsameynayey Miinooyinka dhulka la galiyo oo ay ka sugnaayeen in ka badan 10 macalin oo kuwa Al-Shabaab qaraxyada u sameeyo ah.
Warar oo soo baxayana waxay sheegayaan in goobtaas uu ku dhacay gantaal ay diyaaradu soo riday, inkasta oo aan wali la kala xaqiiji karin waxa uu ka dhashay qaraxaas oo dadka deegaanku ay ku kala macnaynayaan in raga qaraxyada samaynayey ay wax ka qaldameen iyo in gantaal lala beegsaday raxunta ay shaqadu ka socotay.
Maxuu Dani ka sheegay kulankii su’aalo weydiinta ahaa ee ka dhacay Gorowe?
Dagaal xoog leh oo dhex-maray beeraley iyo Ayax duulaan ku soo qaaday, Sawirro:-